Vatongi vedare redzimhosva kuti vanzwe nyaya yemushandi wemundege yeAmerican Airlines
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Vatongi vedare redzimhosva kuti vanzwe nyaya yemushandi wemundege yeAmerican Airlines
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
.Vatongi vedare kuti vanzwe nyaya yekushungurudzwa pabonde kwemushandi wendege yeAmerican Airlines .
American Airlines inotadza kuyedza kumisa kushungurudzwa kwepabonde kwemurindiri wendege.
Mutongo wemutongi Kimberly Fitzpatrick unoramba zvikamu zvese zvechikumbiro chemutongo wakapfupikiswa wakamhan'arwa neAmerica uyo waitsvaga kudzivisa kubvumidza vatongi kuti vanzwe nyaya iyi.
Mhosva yacho ichatongwa muna 342nd Judicial District Court Ndira 24, 2022.
Mhosva yaKimberly Goesling inosanganisira nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi, kurangana uye kutsiva.
Mumwe mushandi wendege yeAmerican Airlines anoti akabatwa chibharo nemumwe mubiki ane mukurumbira akabhadharwa nendege achawana mukana wekutaura nyaya yake kudare redzimhosva, zvichitevera mutongo wakakosha wakapihwa nemutongi wedare redunhu reTarrant.
Mutongo uyu, wakaitwa nemutongi Kimberly Fitzpatrick, unoramba zvikamu zvese zvechikumbiro chemutongo wepfupi wakapihwa na. American Airlines iyo yakaedza kudzivisa kubvumira vatongi kuti vanzwe nyaya yacho. Mhosva yacho ichatongwa muna 342nd Judicial District Court Ndira 24.
"Chitendero chedu chakagara chiri chekuti kana vatongi vekuFort Worth vanzwa nyaya iyi uye vonzwa zvakaitika kumutengi wangu - uye kuti American haana hanya naye sei ndokumutsiva - vachashamiswa," rinodaro gweta Robert Miller weMiller Bryant LLP. muDallas, anomiririra mumhan'ari. "Chatakamboda mukana wekutaura nyaya yedu kune vatongi uye ikozvino tawana mukana iwoyo."
Mumhan’ari munyaya iyi, Kimberly Goesling we Fort Worth, akatanga kutaura pachena nyaya yezvakaitika kwaari - uye basa reAmerica mairi - muvhidhiyo ye2021 Facebook ne Instagram iyo yakasvika kuvanhu vanopfuura 25,000.
Ms. Goesling, anoda kusvika makore makumi matatu mushandi wendege we American Airlines, ane rekodhi yebasa inomuisa pakati pevakanakisisa vekambani. Aive mutungamiriri wechikwata chendege uye aishanda pazvikwata zvekutora vanhu nekudzidziswa zvendege. Kanopfuura kamwe chete, akagamuchira ongororo dzinofadza dzekushanda kwebasa, kazhinji zvichiguma nemabasa anokosha.
Muna Ndira 2018, imwe rwendo rwakadai rwakamuendesa kuGermany, uko pamwe chete nevamwe vashandi veAmerican Airlines, akabatsira kugadzira menyu yakasarudzika yevafambi vekutanga uye vebhizinesi.
Parwendo urwu paive nemukurumbira wekubika uyo wekuAmerica akahaya pasina cheki uye akaramba achishandira kunyangwe aziva nezve mhosva yaaipomerwa yekudhakwa nekudhakwa uye kuita zvepabonde zvisina kufanira, maererano nedare. Pausiku hwokupedzisira hwokugara kweboka racho, shefu akamanikidzira kupinda mukamuri rehotera raMai Goesling ndokumubata chibharo. Kuongorora kweAmerica kwakazoratidza kuti akabvuma kurwiswa.
Paakashuma kurwiswa kwacho kukambani, mamaneja akavimbisa kubhadhara Amai Goesling kuti varapwe uye kuvabvumira nguva yokusava pabasa, sezvinodiwa. Havana kuita kana chimwe chete, panzvimbo pacho vakamubvisa pachinzvimbo chake chaaichiva pachikwata chekutsvaga vashandi vendege.
Mhosva yake inosanganisira nyaya dzekushungurudzwa kwepabonde, kurangana uye kutsiva. Mhosva iyi ndeye Kimberly Goesling v. American Airlines et al., Chikonzero Nha. 342-314565-20 mu342nd Judicial District Court muTarrant County.